Waa maxay ujeedada Maraykanka ee qaaradda Afrika? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWaa maxay ujeedada Maraykanka ee qaaradda Afrika?
Waa maxay ujeedada Maraykanka ee qaaradda Afrika?
Maraykanku wuxu lumiyay saamayntii uu ku lahaa qaaradda Afrika, laakiin siyaasiyiinta ugu sareysa qaaradda ayaa doonaya in ay baddalaan ama ka leexdaan khadkan Maraykanka.
“Aad ayay u fogayd markii ay maal-gashatadu soo garaaceen albaabka, qaaradduna ay albaabada furtay, qofka kaliya ee halkaas taagnaa waa shiinaha”, sidaas waxa BBC-da u sheegay Tibor Nagy, oo ah xoghayaha Maraykanka u qaabilsan arimaha Afrika.
Ganacsiga Shiinaha ee qaaradda Afrika ayaa hadheeyay, doorkii ganacsi ee Maraykanka waqtigii tagay.
Sannadkii 2018-kii dhaqdhaqaaqa ganacsi ee Shiinaha uu ka wado Afrika ayaa saddex jibbaar ku noqday kan Mareykanka.
Qaar ka mid ah kaalimaha siyaasadda Maraykanka ee caasimadaha Afrika ayaan la buuxin tan iyo markii xafiiska loo doortay madaxweyne Trump.
Mr Nagy ayaa sheegay in uu doonayo soo celinta doorkii uu Maraykanku ku lahaa qaarada. “Shaqadaydu waa xaqiijinta marka albaab la qaraaco, in Maraykanku uu halkaa joogo, ” ayuu yidhi.
Haddaba Maraykanku ma gali karaa loollan adag oo ganacsi oo qaaradda Afrika ku dhex mara isaga iyo Shiinaha?
Maraykanka ayaa lumiyay xilal safiirro ah oo uu ku lahaa qaaradda Afrika, dalalkaas waxaa kamid ah South Afrika iyo Nigeria.
Qaar kamid ah safiirrada uu madaxweynaha Maraykanku u magacaabay South Afrika iyo Nigeria ayaa ansaxin ka sugaya golaha Senate-ka, halka wadamada ay kamid yihiin Chad iyo Tanzania ay ilaa hadda bannaan yihiin.
Mr Nagy ayaa si ku meel gaar ah loogu magacaabay xilkan, wuxuuna wakiilka Mareykanka ee Afrika noqday bishii July ee sanadkii 2018-kii.
Xilka ayaa horay u banaanaa, iyadoo markii dmabena si ku meel gaar ah uun loo buuxiyay.
Falanqeeyayaasha siyaasada ayaa sheegaya in, taa bedelkeeda, Shiinahu ay u direen saraakiil sar sare waddamada Afrika.
“Koonfur Afrika, Shiinaha waxay ku leedahay diblomaasi heer sare ah – taas oo muujineysa inay runtii muhiim u tahay Beijing, ” ayay tiri Lina Benabdallah, oo ah khabiir ku xeel dheer xiriirka Shiinaha iyo Afrika, kana tirsan Jaamacadda Wake Forest.
Marwada koowaad ee Maraykanka Melania Trump ayaa la kulantay dhiggeeda Kenya Margaret Kenyatta.
Dhanka kale waxa jira waddamo kale oo awood leh sida Turkiga iyo Hindiya oo ciyaaraya door siyaasadeed oo mug weyn leh.
Dowladda Hindiya ayaa samaysay 18 safaraadood oo cusub oo qaarada Afrika ah.
“Way adag tayay helista Afrika oo ay mudnaantu tahay maamulka,” sida uu sheegay Eric Olander oo ah aasaasaha ururka Africa-China Project.
Luuqada Siyaasadda aan haboonayn.
Xidhiidhka waxaa sii xumeeyey warbixinada ay mas’uuliyiinta Maraykanku kaga hadlaan qaarada Afrika, kuwaas oo loo arkay inaysan munaasib ahayn.
Madaxweyne Trump ayaa u isticmaalay ama ku tilmaamay qaarada Afrika “shithole countries”(Eray aflagaaddo ah), halka qaaradda sidan loo caayay ay tahay goobta ay doonayaan Trumo saaxiibadii in ay ka taajiraan.
Maraykanku wuxuu markii hore ahaa dalka kaliya ee dhaqaalaha ugu badan ka leh maal-gashiga qaaradda Afrika, balse hadda wax walba hoos ayay u dhaceen.
Shiinaha sannadkii 2018-kii waxay sheegeen in Afrika galinayaan dhaqaale dhan $60bn oo daba socday dhaqaale kaas lamid ah oo ay ku maal galiyeen qaarada sannadkii 2015-kii.
Dhaqaalahan ayaa lagu dhisay kaabayaasha dhaqaalaha, dhismaha wadooyinka halbowlaha u ah ganacsiga iyo waxyaabo lamid ah.
Ms Benabdallah ayaa sheegtay hoos u dhaca ganacsiga Maraykanka iyo Afrika in uu hoos u sii weynaaday, taasoo sababaha kale ee keenayana ay ka mid yihiin xiriirka wanaagsan ee ay qaaradda la yeelanayaan wadamo ay kamid yihiin Ruushka iyo Turkiga.
“Waxaan u arkaa tartanka ka imaanaya wadamada kale oo kor u sii kacaya, waqtiyadii danbe,” sidaas waxaa tidhi Benabdallah.
Kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa la sheegayaa inuu hoos u dhac ku yimid dhawaan, arintan ayaana saamayn doonta doorkiis dhaqaale ee Afrika mustaqbalka soo socda.
Hirdanka dhaqaale ee adduunku ka leeyahay qaarada Afrika ayaa ah mid Maraykanku u baahan doono in uu dardar galiyo soo celinta kalsoonida ganacsi, hadii uu doonayo in uu la soo noqdo xiriirkiisii ganacsi.
AKHRISO: Magacyada Masuuliyiinta Dawladda Somaliya Ee Haysta Baasaboorka Ajaanibka Ah